Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Ụbọchị ọhụrụ maka ITB Berlin: Maachị 9-13 dị ndụ na mmadụ
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
Na 2020 ITB kagburu ụbọchị ole na ole tupu ihe omume rere ere kwesịrị ịmalite. eTurboNews buru amụma na a ga-akagbu, mana ọ nọ na Berlin wee malite mkparịta ụka rebuilding.travel, yana PATA na African Tourism Board. Na 2022 mkparịta ụka a ga-aga n'ihu na Berlin - oge a na-atụ anya na ITB ga-esi ike ma dị ndụ.
Messe Berlin, onye nhazi maka ITB kwadoro ihe ngosi ahia ahia ahia kacha ibu ga-alọghachi.
A na-ahazi ITB site na Machị 9-13, 2022 na isi obodo Germany
Echiche G2 ga-emetụta. Ọ pụtara na ọ bụ naanị ndị ọbịa ma ọ bụ ndị ngosi gbakere ka a ga-ahapụ.
N'afọ 2022, ihe ngosi njem kachasị ukwuu n'ụwa na-alaghachi na Berlin, yana mmemme nke mmadụ na ọrụ mebere iji mee ka ITB Berlin bụrụ ahụmịhe zuru ụwa ọnụ ọzọ.
Nke a bụ ozi ọma maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ Berlin, ndị ọkwọ ụgbọ ala taxi, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụgbọ elu, na onye ọ bụla ọzọ nọ n'ụwa na-eme ihe eji ebi ndụ na ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya.
Ọ bụ mmepe dị mma maka ụwa nke njem nlegharị anya, na ntụkwasị obi dị mkpa maka mgbake nke ngalaba ahụ,
The Network Njem Nleta Ụwa malitere na Berlin na Machị 2020 n'akụkụ ITB kagburu. "Anyị na-atụ anya nzukọ na Berlin na 2022 na ITB ga-eme." Juergen Steinmetz, onye isi oche na onye guzobere nzukọ ya na ndị otu nọ na mba 128 kwuru.
ITB setịpụrụ ụda na-ekwu:
"N'ihi ọnọdụ nhazi nke ugbu a, ọ bụ naanị ndị na-agba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ndị gbakere ka a ga-ahapụ ịbanye na ihe omume ahụ ruo mgbe amara ọzọ (iwu 2G)."
Yabụ, dị ka ọnọdụ iwu dị ugbu a si dị, ndị ngosi na ndị ọbịa nke ITB Berlin 2022 ga-enwetarịrị n'oge na-adịbeghị anya ma ọ bụ were ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi. EU kwadoro ọgwụ mgbochi COVID-19 ma weta ihe akaebe nke a site na asambodo EU dijitalụ.
Dabere na Claudia Dallmer, Onye enyemaka PR maka ITB, ndị ọbịa na-abụghị EU kwesịrị ịdị mma na asambodo akwadoro ma ọ bụ nwee ike ịtụgharị ngafe ịgba ọgwụ mgbochi n'ime akwụkwọ EU.
Nkọwa ndị ọzọ ga-abịa, dịka Nwada Dallmer siri kwuo.
Maka oge a, Messe Berlin kwere nkwa na webụsaịtị ya:
Ọnwa ndị na-adịbeghị anya egosila otú nzukọ ihu na ihu dị n'etiti ndị mmadụ si dị mkpa. Ihe omume dị ka nke anyị bụ obi mgbawa nke ụlọ ọrụ ahụ. Dịka ndị ngosi na ndị ọbịa azụmaahịa ị nọ n'etiti ihe omume ahụ. N'afọ 2022, otu ihe ga-adị mkpa: nzukọ gị ga-adị mma na nke ọma dịka o kwere mee.
N'oge ndị a, ihe omume chọrọ nchekwa pụrụ iche na ịdị ọcha. Anyị na-ekwe gị nkwa na anyị lekwasịrị anya bụ ichekwa ahụike gị. Ebumnobi anyị doro anya: ịmepụta gburugburu ebe obibi dị ka nchekwa na ọkachamara dị ka o kwere mee iji mee ka ụlọ ọrụ njem na azụmahịa gị nwee ọganihu ọzọ. Iji mezuo nke a, anyị na ndị ọrụ ahụike ọha na eze dị mkpa nke ala Berlin na-akpakọrịta mgbe niile.
Ị nwere ike chọpụta ihe ndị ọzọ Ebe a gbasara ajụjụ gbasara nchekwa na ịdị ọcha.